Maqaallada Gal Glikman ee Martech Zone |
Maqaallada by Gal Glikman
Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee daabacayaasha iyo suuq kasta oo maanta jira ayaa ah kuwa xayeysiiska xayeysiiya. Ganacsatada, kor u qaadista xayeysiinta xayeysiinta waxay keeneysaa awood la'aanta in la gaaro dhagaystayaasha xiisaha badan ee xayiraadda. Intaas waxaa sii dheer, heerarka xayiraadda xayeysiinta ee sarreeya waxay keeneysaa tirakoob yar oo xayeysiis ah, oo ugu dambeyntii kordhin kara qiimaha CPM. Tan iyo markii xayiraadaha xayeysiinta ah ay ciyaareen toban sano ka hor, sicirka xayeysiinta ayaa cirka isku shareeray, iyagoo helay malaayiin isticmaale isla markaana ku faafaya goob kasta. Mid ka mid ah natiijooyinkii ugu dambeeyay